ISaudi Arabia Itshala Ikusasa Manje Ngezinhlelo Zamasiko Eziyi-100+
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Saudi Arabia Breaking News » ISaudi Arabia Itshala Ikusasa Manje Ngezinhlelo Zamasiko Eziyi-100+
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! • Amasiko • Industry Hospitality Industry • Izindaba • I-Saudi Arabia Breaking News • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
I-Saudi Arabia e-FII
Ku-Future Investment Initiative (FII) e-Riyadh namuhla, iPhini likaNgqongqoshe Wezamasiko, uMhlonishwa u-Hamed bin Mohammed Fayez, uqokomise uhlu oluhlaba umxhwele lwezinhlelo zamasiko ezingaphezu kwe-100, ukusebenzelana nemicimbi eyenzeka eMbusweni ngaphambi kokuphela konyaka.
Ishejuli enempilo nehlukahlukene ihlanganisa imicimbi eminingi eholwa izikhungo zamasiko ezingama-25 uMnyango Wezamasiko oyethule kusukela yasungulwa eminyakeni emi-3 edlule.
U-HE Fayez uthe isiko laseSaudi liyambulwa futhi linikezwa amandla ngezinga elingakaze libonwe kanye nesivinini.
Izifiso zoMbuso ziveza amathuba amaningi ezimbonini ezizimele zasekhaya nezamazwe ngamazwe.
“Lesi yisikhathi esijabulisayo samasiko eSaudi Arabia. Emasontweni azayo kuphela, sizophatha umkhosi wethu wokuqala omkhulu wamafilimu emhlabeni jikelele, i-art biennale yokuqala kanye namafestivali aphesheya njengeFashion Futures kanye ne-MDLBeast,” kusho u-HE Fayez iFII. "Lezi zenzakalo zisukela ekuqhubekeleni phambili okuqhubekayo koMbuso ukuze kuthuthukiswe ubuciko nokudala umnotho wamasiko ophilayo eMbusweni." I-Saudi Arabia isivele inikela ngenkuthalo embonini yokudala yomhlaba wonke.
Kwezinye izimpawu zenqubekelaphambili esheshayo kanye nesifiso sokuvelela esisanda kutholakala, uMnyango wenze isu elizovula amathuba amasha okutshalwa kwezimali kwezamasiko ngama-PPP noma ngokuhlanganyela, liqinise ingqalasizinda emayelana nezimboni zezobuciko, kanye nokwenza lula ukulawula ukuze kuvunyelwe amabhizinisi ukuthi athuthuke. Kuhambisana nesidingo esikhulayo samasiko kuwo wonke uMbuso, ukushintsha I-Saudi Culture landscape isivele yadonsa amehlo abatshalizimali bamazwe ngamazwe.
U-HE Fayez usheshe wakuveza ukuthi indima yoMnyango ayigcini nje ekuthuthukiseni izimboni zezobuciko ngaphakathi koMbuso kodwa nasekukhuliseni nasekuthuthukiseni izinga lokushintshisana ngamasiko nontanga yawo emhlabeni jikelele.
“Ngiyaziqhenya kakhulu ngoMbuso okhankasela ngempumelelo amasiko kanye nezimboni zezobuciko ukuba zibe yingxenye yengxoxo ku-G20,” kusho u-HE Fayez ngesikhathi sengxoxo yakhe. "Kuqale ngesikhathi sobumongameli baseSaudi ngonyaka odlule futhi kuqhubekile, okusho ukuthi siqinisekise ukuthi isiko linendawo ehlala njalo ku-G20 futhi liyingxenye ye-ajenda yezomnotho emhlabeni."